Home News Shil Khasaare geystay oo ka dhacay Wadada xiriirisa Garowe iyo Laascaanood
Shil Khasaare geystay oo ka dhacay Wadada xiriirisa Garowe iyo Laascaanood
Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo saaka ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka Garoowe iyo Laascaanood ee Puntland Sida ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo gaaray goobta uu shilku ka dhacay.
2 qof ee ku dhimatay Shilkaasi waxaa kamid ah Jaamac Maxamuud Maxamed Ciise(Good) oo ahaa ganacsade garab-rarato ah,kana shaqeysan jiray magaalooyinka waaweyn ee Puntland.
Jaamac ayaa aad looga yaqiinay Magaalooyinka Garoowe iyo Laascaanood.
Jaamac ayaa sameeyay ganacsi abuur si mucjiso ah u shaqeeya,isagoo la baxay magaca”Carwo Quraab”,islamarkaana garbaha ku qaadan jiray dhammaan waxyaabaha uu gadayo oo ay ku jiraan miraha iyo Xabagta.
Qaar ka mid ah dadka kunool Magaalooyinka Garowe iyo sidoo kale Laascaanooda ayaa si weyn uga naxay geeridda ku timid Jaamac.
Magaalooyinka Puntland ayaa waxaa kusoo batay Shilalka , iyadoo ay xusid mudan tahay in sanadkii lasoo dhaafay ay dad badani ku dhinteen Shilal ka dhacay duleedka Magaalada Garowe.